Wefdigii uu horkacayey abaandulaha ciidanka XDS oo xalay la hadlay shacabka Caabduwaaq (Sawirro) – Radio Daljir
Seteembar 1, 2013 2:39 b 0
Caabudwaaq, September 1, 2013 – Magaalada Caabudwaaq ee woqooyiga Galguduud waxaa shalayto gaaray masuuliyiin sar sare oo ka trisan dowladda Soomaaliya, kuwaas oo ay horkacayeen Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka iyo gudoomiyaha gobolka Galguduud.
Abaandulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabdirisaaq Khaliif Cilmi iyo Gudoomiyaha gobolka Galguduud Xuseen Cali Weheliye (Cirfo) ayaa xalayto kulamo la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada, saraakiisha ciidanka, iyo maamulka degmada ee dowladda federaalka ah.
Masuuliyiinta ka socday dowladda dhexe ayaa bulshada Caabudwaaq ka dhaadhiciyey heshiiskii dowladda dhexe iyo Ehellusuna ay gaareen iyo fulintiisa, waxaana isla soo dhoweyntii shalay, kadib wefdiga lagu wareejiyey ciidamadii degmada iyo qalabkii ciidanka ee degmada yaalay.
Gudoomiyaha gobolka Galguduud Xuseen Cirfo ayaa sheegay in amniga degmada iyo kan gobolka oo idil uu wanaagsan yahay, wuxuuna ugu baaqay hay?adaha maxaliga ah iyo kuwa caalamiga ah in ay qeyb ka noqdaan horumarka ka socda gobolka Galguduud.
Maamulka dowladda federaalka ah ee degmada, ururrada bulshada kala gedisan, waxgaradka iyo saraakiisha ciidanka dowladda ee Caabudwaaq ayaa si heer sare ah shalay gelinkii dambe u soo dhoweeyey wefdiga ka socda dowladda dhexe ee uu horkacayey Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka.
Daawo sawirrada soo dhoweyntii shalay loo sameeyey wefdiga dowladda federaalka ah.